Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် -
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အံ့သြ? အစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစက်လှေကား? ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒ? လူမှုစိုးရိမ်စိတ်, သိမြင်မှုပြဿနာများ, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း?
More Information ကို ဘာသာပြန်ချက်များ
ဒီ website တွင်လုပ်တောင်းဆိုမှုများထောက်ပံ့လေ့လာမှုများ၏ collection များကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများနှင့်ဆောင်းပါးများကို၏ဝေဖန်မှု။
GED Wilson မှ TEDx Talk
လတ်ဆတ်ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များပါဝင်သော Porn news feed, တွင်သင့်ဦးနှောက် Browse ။
သင့်တွင်လိင်စိတ်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါသလား။ ဒီ Quiz ကိုယူပါ
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတက်စေသည် - ရက် 90 အစီရင်ခံစာ
Gary Wilson One Year Memorial တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
Viagra နဲ့တောင် လိင်ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။
အိပ်ရာထဲမှာ အကြာကြီးနေတော့ PIED က ထွက်သွားတော့မယ်။
သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ (ACSID-11) အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ အကဲဖြတ်ခြင်း- ဂိမ်းဆော့ခြင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များအတွက် ICD-11 စံနှုန်းများနှင့် အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ (2022) ကို ဖမ်းယူနိုင်သော စစ်ဆေးမှုတူရိယာအသစ်တစ်ခုမိတ်ဆက်ခြင်း။
အမျိုးသမီးတွေကို ပိုလေးစားပြီး တကယ့်လိင်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ သင်ယူနေပါတယ်။
ညစ်ညမ်းခွေထွက်ပြီးနောက် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်သည်။
reboot Nation ဖိုရမ်
တစ် ဦး က "reboot" အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုမှပြီးပြည့်စုံသောအနားယူသည်။ အားပေးမှုနှင့်ပညာရေးဖြင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်စတင်ပါ RebootNation.org
Noah BE ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ရန်နှင့် porn-induced လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုသင်တန်းများ ပိုမိုသိရှိရန်